Imaaraadka oo qorshe cusub wada Blackwater iyo beelo ku caawinaaya. – Xeernews24
Imaaraadka oo qorshe cusub wada Blackwater iyo beelo ku caawinaaya.
11. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Jariirada Caanka ah ee Al-Sharqi ayaa wareysi la yeelatay Falanqeeyaha Soomaaliyeed Cali Jabril Al- Kuti kaasoo ku takhasusay arrimaha Africa iyo Badaha.
Cali ayaa banaanka soo dhigay sababta ay Imaaraadka Carabta u joogto dalka Soomaaliya isagoo caddeeyey inay ujeedka ugu weyn oo ay ka leedahay Geeska Africa uu yahay sidii ay u qalqal gelin laheyd danaha ay Qatar iyo Turkiga ka leeyihiin dalka Soomaalia.
Cali ayaa wareysiga uu siiyey Al-Sharqi ku sheegay inay Imaaraadka Carabta hubeysay qaar ka tirsan qabaa’ilada Soomaaliya si ay u dumiyaan dowladda Dhexe ee Soomaaliya ka dhisan.
Cali ayaa sidoo kale tilmaamay in xidhitaankii Isbitaalka Zayid ee Magaalada Muqdisho uu muujiyey xaqiiqda kaalinta ay Imaaraadka Carabta ka cayaareyso dalka Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/black.jpg 184 273 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-11 10:28:212018-09-11 10:28:21Imaaraadka oo qorshe cusub wada Blackwater iyo beelo ku caawinaaya.
DAAWO Xaalada Cabdi Iley, Xaaskiisa & Hooyadiis oo Geeri iyo nolol midna... Soomaalia saameyn nuucee ah ayay ku yeelatay Dhacdadii September 11, 2001-d...